July Dream: A low-life burmese
Posted by JulyDream at 4:59 PM
စာရေးသူကတော့ဗမာလူမျိုးဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကို့ တစ်ဦးချင်းမှာတောင်ကိုယ့်ကိုကိုလေးစားမူမရှိရင်သူများကလေးစားဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြုံဖူးသလောက်ဗမာပြည်ကတိုင်းရင်းသား
ပေါင်းစုံဟာမိမိတို့ ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးကိုပဲနှိပ်ကွပ်ပြီးအထင်သေးစကားပြောဆို
ကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ဘာသုသေတနမှမရှိပဲရမ်းပြီးအထင်နဲ့ ပြောကျတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော့်အတွေ့ အကြုံအရ၀င်ပြီး
စာရေးသူ ဆိုလိုချင်တာ အဲဒီအချက် မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ အရေအတွက် ဆိုတာကလည်း အတိအကျ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်သာအောင် ညွှန်းဆိုထားတဲ့ ကိန်းတစ်ခု အနေနဲ့ပါပဲ။ သူ့အနေနဲ့ မိမိ လူမျိုးကို နှိမ်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်မှန်း သိသာပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ အပြောခံနေရတာကို ညွှန်းပြဖွင့်ဆို ထားတာပါ။ အဓိက ခေါင်ချုပ်ကို မြင်အောင် ကြည့်စေချင် ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခုလို ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် ကိုရန်ကင်းကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ အမြင်တွေ မတူလည်း ပျော်ပျော် ပါးပါးပေါ့ ခင်ဗျာ။
အေးကွာ မှန်တယ် ကိုအိမ်မက် ပြည်တွင်းမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေက ဗမာ၊ တိုင်းရင်းသား၊ အစသဖြင့် ခွဲခြားနေကြတယ်။ ပြည်ပမှာ ရောက်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား တွေက အချင်းချင်း ကုတ်ဖဲ့ဖို့ဘဲ စဉ်းစားကြတယ်၊ ဘယ်လိုမှ စုစည်းလို့ ကို မရဘူး။
ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့ လူကို အောက်တန်းစား လို.သတ်မှတ်မယ်၊ ဂုဏ်ဒြပ်မရှိတဲ့ သူကို အောက်တန်းစားလို. သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မလဲ အောက်တန်းစားပါပဲ။
ပိုက်ဆံ တွေရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူများမျက်ရည် တွေစိတ်ဆင်းရဲ မှုတွေကို ရင်းပြီး
ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူတွေကိုကော အထက်တန်းကျ လှချည်ရဲ. လို.သတ်မှတ် နိုင်ပါ့မလား။ ပိုက်ဆံ ရှိတိုင်း အဆင့် အတန်း မရှိနိုင်ပါဘူး။ အတွေး လေးပါ။
ငွေကြေးကြွယ်ဝရုံနဲ့တော့..အထက်တန်းစားလို့ သတ်မှတ်လို့ မရဖူးထင်တယ်ခင်ဗျ
လူမျိုးစွဲဆိုတာကတော့ လူဆိုတာရှိနေသရွေ့ တော့ချွတ်လို့ ရမယ့်အစွဲတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ဖူးဗျာ…
Dear I'm gretting to you.I do love this post .u know I know and every body know the true story of ours.We will try our best for our people and land to escape from the dark room.
ဒီပို့စ်ကို အစက လက်ရှောင် မလို့ဟာ.. ဒါပေမယ့် ခုတလော ကျန်းမာရေး တယ်ဆိုးလို့ ဘာသာရေး လိုက်စားဖြစ်တော့ ဘုရားဟောတဲ့ အထက်တန်းစား ကို မဟာသတိပဌာန သုတ်က ပြတဲ့အ တိုင်း ရေးကြည့်မယ်နော်။ အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံး အစားကနေ အဆင့်အတန်း အနိမ့်ဆုံး အစားထိ အထက်ကနေ အောက်ကို ရေးသွားပါမယ်။ လိုချင် ဆန္ဒ ကိလေသာကိုတပ်မက်မှုကလဲ အထက် ၃ပါးမှာ လုံးဝ မရှိတော့ပေမယ့် အနာဂါမ် ကနေ အောက်အထိ က လူတွေက အဆင့်အလိုက် လိုချင် ဆန္ဒ တဖြည်းဖြည်း များလာပါသတဲ့။
စူဠ သောတာပန် (ဒိဌိ ငါစွဲ ပြုတ်သူ)
သီလ ရှိသော ပုထုဇဉ် သာမန်လူသား
သရဏဂုံတည်သော ပုထုဇဉ် သာမန်လူသား တဲ့။
ကျန်တာကတော့ တိရစ္ဆာန်နဲ့ သိပ်မထူးခြား လှဘူး တဲ့လေ။ အဆင့်အတန်းကို အထက်တန်းစားနဲ့ အောက်တန်းစား ကျွန်မကတော့ ဘုရားရဲ့ သမီး ပီပီ ဘုရားက ခွဲသလိုပဲ ခွဲချင်တယ် နော်။
မှန်တယ်..မှန်တယ်.. ဗမာက အောက်တန်းစားပဲ..
အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေက မတူညီတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဓိက ဆိုလိုချက်ကို သဘော မပေါက်နိုင် ကြဘူးလို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။ ပေါက်တဲ့သူတွေ ရှိသလို မပေါက်တဲ့သူလည်း ပါနေပါတယ်။ ဗမာ အောက်တန်းစား ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကြောင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် အခံလေးမှာ မခံချိ မခံသာ ဖြစ်နေရမှာပါ။ အဲဒါလေးကို ခဏမေ့ပြီး ဆိုလိုရင်းကို ဆက်လက် တွေးတော စဉ်းစားကြည့်ပါလားဗျာ။ အားလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါးပေ့ါဗျာ။
ရှိနေတာပဲလေ။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ခွဲတာလား၊
အင်း လူတွေက သူများကို မကောင်းပြောရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်လေးလည်း
အမှန်တော့ ဗမာတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းအောင်
ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြတာလည်း ဖြစ်
ခေါင်းစဉ်ကလည်း အတော် စိတ်တိုစရာ ကောင်းနေလို့
အခုတော့ ဘုံဘယ်နှဆင့်ရှိလည်း သိသွားဘီ။ :P
ဟတ် ဟတ် ဟတ်။
ကိုယ် လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် ။
`ဗမာ အောက်တန်းစား´ ဆိုတဲ့စာကိုမြင်လိုက်ကတည်းက ရင်နာတာအမှန်ပဲ။
ဒါပေမယ့် စာရေးသူ `ကိုသခင်ကြီး ´ဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားရတဲ့အသံတွေကို မချိတင်ကဲ သုံးသပ်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘယ်အရပ် ဘယ်ဒေသ ဘယ်လိုအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ `ဗမာဟာဗမာ´ပဲလေ
ဗမာကို အောက်တန်းစားလို့ သုံးနှုန်းလိုက်လို့ ရင်ထဲမချိအောင်နာမိတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုသတ်မှတ်ခံရလောက်အောင် ကိုယ့်တို့ဘာတွေမှားခဲ့လို့လဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ
တိုင်းပြည်တပြည် လူမျိုးတမျိုးကို တခြားနိုင်ငံတွေက အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့အခါ ဘာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါသလဲ။
ကိုယ့်အထင်တော့ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ် မူတည်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ။်
ဒါကြောင့် ကိုယ့်တို့အစိုးရ ကြောင့် ကိုယ့်တို့ဗမာတွေကို
ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်သာဖြစ်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးအတော်များများက မြန်မာ ဆိုတာကို အောက်တန်းစားအဆင့်ထဲမှာ သက်မှတ်တာ မြင်ရတိုင်း ကြားရတိုင်း ရင်နာမိတယ်။ မြန်မာဆိုတာ အမှိုက်ပေါ့။ ဒါကို ကျနော်တို့ ကက်ကက်လန်အောင် ရန်ပြန်တွေ့နေမယ့် အစား မဟုတ်ကြောင်း အလုပ်နဲ့ သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားကြရအောင်။ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပြင်ဆင်ကြရအောင်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကို ဒေသခံလူမျိုးတွေက အမှိုက်ရှင်းသလို အမြဲ လိုက်ရှင်းနေရရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ အမှိုက်ကနေ မတက်တော့ပါဘူး။ မြန်မာတစ်ဦးတစ်ယောက် ကောင်းနေရုံနဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ် တက်မလာပါဘူး။ မြန်မာလို့ ခံယူမယ့် လူတွေ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံး ကိုယ်စီ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ စိတ်ဓါတ်တွေကို မြှင့်တင်၊ အရည်အချင်းတွေကို မြင့်တက်အောင် ကြိုးစားလိုက်ကြရင် အမှိုက်ကနေ ရွှေဖြစ်လာမှာပါ။ ကမ္ဘာက မြန်မာကို နှိမ်တာ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ မမေးပါနဲ့။ ကျနော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စီ တာဝန်တွေ လစ်ဟင်းနေကြလို့သာ အမှိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော်တော့ ခံယူမိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ တာဝန်တွေ ကျေပွန်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျနော်တို့ဟာ အမှိုက်တွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူ့လောကရဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို တင်ရတာကလည်း ဗမာ အောက်တန်းစားလို့ ပြောချင်လွန်းလို့ တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်နေပျက်နေတာကို သတိမူ မိအောင် တင်လိုက်တာပါ။ အနှိမ်ခံ ဘ၀ကနေ လွတ်အောင် ကြိုးစား စေချင်တာ အဓိက စေတနာပါပဲ။ ကိုယ်တွေ လုပ်ခဲ့လို့ ကိုယ်ခံရတာပဲလေ။ ကိုယ်တွေ ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကို ရည်ညွှန်းတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာတွေထဲက စုန်းပြူးဗမာတွေ လုပ်ခဲ့လို့ ဗမာအားလုံး အမည်ပျက် နေရတာပါ။ အဲဒီတော့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒါဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နည်းစံနစ်အတိုင်း လူတန်းစား social class ကို ခွဲခြားပြထားတာပါ။ အကြမ်းအားဖြင့် မှန်ပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းနဲ့ ခွဲခြားပြီး လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ရပါတယ်။ အမှန်ကို မျက်ကွယ်မပြုရပါ။ Social class ကိူ resident, employment, education ဆိုတာ ၃-ခုနဲ့ ခွဲရပါတယ်။ ငွေသက်သက်နဲ့ခွဲလို့ မရပါ။ ငွေက နေ့မြင်ညပြောက် ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ နေအိမ်ရယ်၊ အလုပ်ရယ်၊ ပညာရေးရယ်က အချိန်တစ်ခု ရင်းနှီးပြီးမှ ရတတ်ပါတယ်။